Ukwethulwa kweJoiwo Weatherproof emergency tele-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co, LTD
Ukwethulwa kocingo oluphuthumayo lwaseJoiwo
ISIKHATHI: 2020-01-16 HITS: 80
UJoiwo usungule okusha ucingo oluphuthumayo lwesimo sezulu I-JWAT935.
Lolu cingo luvame ukusetshenziswa eTunels, iMining, Marine, Underground, Metro Station, Railway Platform, Highway Side, Amahhotela, Amapaki Okupaka, Izitshalo Zensimbi, Amakhemikhali Chemical, Amapulangwe Amandla Nendawo Ehlobene Yezindawo Zokusebenza.
I-1.Aluminium alloy die cast cast shell, amandla e-mehendi aphezulu kanye nokumelana okunamandla nomthelela.
Indawo engaphezulu kwegobolondo ifafazwa ngogesi oshisa kakhulu, onekhono elihle lokuphikisana nemibala.
4. Ukusekela umsebenzi wesiteshini esisodwa ohambisa inkinobho eyodwa;
5. Izinkinobho ezintathu zokushayela isivinini somsebenzi zingasetwa ngokunganqunyelwa.
6. Umsebenzi we-intercom ogcwele ngokuphelele.
7. Ukuzwela kwezikhulumi nemakrofoni kungalungiswa; I-G.729, G.723, G.711, G.722, G.726 nezinye izindlela zekhodi yezwi zingakhethwa.
8. Idizayini enobunikazi be-casing yocingo ayinakungena manzi futhi ayinalo uthuli, akukho khava engenamanzi iyadingeka, futhi yinhle futhi iyasebenza.
9. Ukuvikelwa kobufakazi besimo sezulu ku-IP67.
10. Ukujikeleza kwangaphakathi kocingo kwamukelwa umjikelezo ohlanganisiwe ophelele ohlanganyele emhlabeni wonke, onenombolo yokushayela efanelekayo nokukhulumisana okucacile nomsebenzi ozinzile.
11. Ingxenye yocingo eyenzelwe wena iyatholakala.
12. I-CE, i-FCC, i-RoHS, i-ISO9001 ihambisana
Ngabe ufuna ucingo oluphuthumayo oluphuthumayo olungenawo noma iyiphi iprojekhthi?
Ukwethulwa kocingo lwezimboni olwemboni kaJoiwo ngesibonisi se-LCD
IPTC2020 konke kusethiwe futhi kumi ngomumo!